ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မှ တစ်နှစ်တာ လူငယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရရှိသွားတဲ့ ဖေးလ်ဖိုဒန်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း…. - YTV Channel
Home | Sports | ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မှ တစ်နှစ်တာ လူငယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရရှိသွားတဲ့ ဖေးလ်ဖိုဒန်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း….
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မှ တစ်နှစ်တာ လူငယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရရှိသွားတဲ့ ဖေးလ်ဖိုဒန်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း….
လန်ဒန်မြို့နယ်အခြေစိုက် မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ stockport မြို့မှာမွေးဖွားလာတဲ့ကောင်လေးဟာ ဘောလုံးပညာပါရမီ ပါလာခဲ့ပြီး ယနေ့ပရိသတ်ရှေ့မှောက်မှာ ဘောလုံးလောက ကဇာတ်ရုံကြီးထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ခြေစွမ်းတွေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် နာမည်ကြီး ကလပ်ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးမှာ တောက်ပနေမယ်လို့ ဘယ်သူများထင်ကြမှာလဲ….ဟုတ်ပါတယ်….ကျနော်ပြော ပြပေးနေတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ ဖေးလ်ဖိုဒန် ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်….လန်ဒန်မြို့ရှိ skysport မြို့ကြီးမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားလာခဲ့ပြီး သူ့အသက်လေးနှစ်အရွယ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ ဘောလုံး အကယ်ဒမီ စကောလား ရှစ် မှာစတင်ဝင် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်…. St Bede’s Collage မှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ကျူရှင်ခကို မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်းဘက်က ပေးချေပေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…
အင်္ဂလန် လူငယ်အသင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်တော်တော်များများမှာ ဂိုးတွေ သွင်းယူပြီး ခြေစွမ်းပြကစားနေခဲ့ရာမှ မန်ချက်စတာစီးတီး လူငယ်အသင်းမှာလည်း ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မှာ မန်စီးတီး လက်ရှိ နည်းပြ ပတ်ဂွာဒီယိုလာက မျက်စိကျပြီး ဆယ်တစ်နဲ့ ကန်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ စတင် ထည့်သွင်းလာခဲ့ ပါတယ်…ပွဲက သရေ ကစားပွဲဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် ပတ်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ အရံမှာပဲထိုင်စေပြီး ပွဲအနေအထားကိုကြည့်နေစေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. နောက်ပိုင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ရာသီကစတင်ပြီး ရာသီကြို ပွဲစဉ်များတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး သူရဲ့ ကစားပုံကို မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကို ၂-၀ နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြမှုကို သတိထားမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်…. ထို့နောက် ရီးရဲလ်နှင့် ကစား သွားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပြီး မန်စီးတီးရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းမှာ လေးကြိမ်မြောက် လူငယ်အသင်းက နေ ခြေစွမ်းပြတောက်ပလာခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်….
‌နောက်ပိုင်းရာသီတွေမှာ ခြေစွမ်းတစ်စထပ်တစ်စ ပို၍ကောင်းလာမှုကြောင့် စီနီယာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကစားစေခဲ့ပြီး ၂၀၂၁-၂၂ ခုနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်နှစ်တာ လူငယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ရရှိသွားသည်အထိ ကောင်း မွန်တဲ့တောင်ပံတိုက်စစ် ကစားသမားလေးတစ်ဦးလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…ကဲဘောလုံးချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ နောက်ရက်တွေမှာလဲ ဘယ်ကစားသမားရဲ့ အကြောင်းလေးကို ဗဟုသုတရဖွယ်တင်ဆက်ပေး မလဲဆိုတာလေးကို စောင့်မျှော်အားပေးရင်း တင်ပေးစေချင်တဲ့ ကစားသမားလေးတွေရှိရင်လဲ ကွန့်မန့်လေးမှာမန့်ပေးခဲ့ပါဦးနော်….